आजको राशिफल : बिहीबार कुन राशिका लागि दिन शुभ ? – Khabarhouse
आजको राशिफल : बिहीबार कुन राशिका लागि दिन शुभ ?
Khabar house | १६ बैशाख २०७८, बिहीबार ०१:०४ | Comments
काठमाडौं : वि.सं.२०७८ साल बैशाख १६ गते बिहीबार । ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल २९ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । वसन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । बैसाख कृष्ण पक्ष । तिथि–तृतीया,५३ घडी ०३ पला,रातको ०२ बजेर ४२ मिनेट उप्रान्त चतुर्थी । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर २८ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ३५ मिनेट । दिनमान ३२ घडी ४७ पला । अन्तरराष्ट्रिय नृत्य दिवस ।
मेष : समय मध्ययम रहेकोले कुनै व्यापार व्यावसायमा लगानी गर्नको लागि केही दिन कुर्नुहोला। आर्थिक व्यावस्थापनका लागी गरीने कामहरु अन्तिम निष्कर्षमा नपुगी विचमानै अवरुद्ध हुन सक्छन्,ध्यान दिनुहोला । हरेक क्षेत्रमा अवसरवादी हावी हुनाले कामहरु समयमा सम्पन्न हुदैनन् । पढाइ लेखाइमा एकरुपमा नहुँदा अरुभन्दा पछी परिनेछ । माया प्रे’ममा अविश्वास तथा धो’का हुने अधिक सम्भावना रहेकोछ ।
बृष : यात्राका क्रममा उपलव्धी मुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । औषधीजन्य व्यापारमा लगानी गर्नेहरुले मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने तथा आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने समय रहेकोछ । पढाइ लेखाइ बिभिन्न कारणले बिग्रन सक्छ ध्यान दिनुहोला । माया प्रे’ममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने जीवन साथिको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । भौतिक सम्पती तथा सवारी साधन प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ ।
मिथुन : बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई परास्त गर्दै नतिजा आफू तिर ल्याउन सकिनेछ भने ऋ’ण, रो’ग तथा सत्रुबाट छुटकरा पाउने समय रहेको छ । राजनीति गर्नेहरुले सहकर्मिहरुलाई किनारा लगाउदै पद प्रतिष्ठा पाउने छन् । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने योग रहेकोछ । माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ भने मामा तथा मावली पक्षबाट सहयोग तथा समर्थन पाइनेछ ।
कर्कट : पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले प्रतिस्पर्धिहरुलार्ई पछि छोड्दै एक कदम अगाडी बढ्न सकिनेछ। माया प्रे’मका कोपिलाहरु फक्रिएर जानेछन् भने नया ठाउबाट प्रे’म प्रस्ताव आउनेछ। व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आक स्मिक धन सम्पती हात लागी हुने योग रहेकोछ । पदिए दायित्व बढ्ने तथा काम गर्ने ठाउमा तपार्ईँको काम गर्ने शैलिको धेरैले प्रशंसा गर्नेछन् ।
सिंह : पहिलेका कमि कमजोरिहरुलाई सुधार्ने अवसर आउने छ । ठुला तथा विशिष्ट योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि केहि समय पर्खनुनै राम्रो हुने छ । आफन्त तथा आमासँग सानो सानो कुरामा विवाद बढ्ने योग रहेकोछ । पढ्ने लेख्ने कामका खासै मन नजादा अरुभन्दा पछी परिनेछ । व्यापार व्यावसायमा समय दिएपनि खासै उपलव्धी हासील हुने छैन भने घर जग्गाको कारोबारबाट केहि मात्रामा लाभ लिन सकिनेछ ।
कन्या : दाजुभाई तथा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने छ । पराक्रम बढ्ने हुनाले शाहशिलो काममा हात हाल्नु होला सफलता मिल्नेछ । वादविवाद तथा मुद्दा मामिलामा तपार्ईँ कै जित हुनेछ । माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढ्नुको साथै पति प’त्नी बीच मा’याको डो’रो क’सिलो भएर जानेछ । उद्योग व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । छोटो तथा अर्थपुर्ण भ्रमणको तय हुनेछ । बिद्यामा सोचेजस्तै सफलता पाइनेछ ।
तुला : अध्ययनमा रुची बढ्नेछ भने उल्लेख्य सफलता प्राप्त हुनेछन् । आफन्त तथा परिवारको साथ रहने हुँदा उपलव्धी मुलक कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुनेछन् । प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समयले साथ दिने हुनाले एक अर्का लाई विश्वास गर्दै जान सकिनेछ । बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले बोलेरै राम्रा कामहरु गर्न सकिनेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला ।
बृश्चिक : राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन पाइने हुँदा नाम कमाउन तथा पद प्राप्तीको योग रहेकोछ । बिभिन्न विलाशी वस्तुको प्रयोग गरी मनग्गे आम्दानी हुने छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने चालिएका कदमहरुबाट भने जस्तो नतिजा आउने हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ । माया प्रे’ममा एक अर्कालाई विश्वास गर्ने वाताबरण बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
धनु : व्यापार व्यावसायमा प्रसस्त समय दिए पनि आम्दानी थोरै नै हुनेछ । कामगर्दा ख्याल गर्नु जरुरी देखिन्छ, समयमा कामहरु सम्पन्न नहुँदा मान सम्मानमा आ’घात पर्न सक्छ । पढाइ लेखाइमा तपार्ईँ आफ्नै कारणले बिग्रन सक्छ ध्यान दिनुहोला । यात्राको गतिलो सम्भावना रहेको छ भने विदेशी सामानको व्यापार फस्टाएर जानेछ । माया प्रे’ममा अविश्वास बढ्नेछ भने सामान्य स्वास्थ्य स’म्वन्धी स’मस्या आउने योग रहेकोछ ।
मकर : बिभिन्न भौतिक तथा विलासी सामानहरु जुट्नेछन् भने भविश्यमा आम्दानी हुने व्यावसायमा लगानी गर्न सकिने छ । आएस्रोतका बाटाहरु फराकिला हुनेछन् भने कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । बैक तथा बित्तिय क्षेत्र सँग सम्बन्धित व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ । माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेको छ ।
कुम्भ : सांगितिक माहोलमा दिन बित्ने हुदा मन प्रशन्न रहने छ । राजनीति तथा समाज सेवामा गरीएको लगानी बाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुने छ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि हुने छ । नीति निर्माण तहमा तपार्ईँको सह-भागिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । व्यापार व्यावसायमा प्र्रशस्त नाँफा कमाउन सकिनेछ भने पढाइ लेखाइमा भनजस्तो सफलता हुने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा पदोन्नतीको गतिलो योग रहेकोछ ।
मीन : यात्रा तथा मनोरञ्जनमा समय खर्च हुनेछ । लामो दुरीको धा’र्मिक तथा शैक्षिक यात्रा मार्फत मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । सानो सानो लगानी गर्दापनि व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ। प्रे’मको ठोरो कसिनुको साथै घर परिवार तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग पाइनेछ । सरकारी क्षेत्रमा सम्मानजनक सहभागिता रहने योग रहेकोछ ।
तपाईँ दिन शुभ रहोस् । यूवा ज्योतिषी डिपी भण्डारी, ज्योतिष परामर्ष सेवा केन्द्र । चाबहील, काठमाडौं फोन न.९८०८३०७२७५ नोट:चिना तथा टिप्पन वनाउन,चिना हेराउन तथा वास्तुसँग सम्बन्धीत जानकारिको लागी अवस्य सम्झनुहोला ।